Home > Products > LED Grow Light > ခေါက်သိမ်းနိုင်သော LED အလင်းကြီးထွား > Hydroponic Led Grow Light With Samsung And Orsam LED
ဆေးခြောက်နှင့်လျှော်များအတွက်အလင်းခေါက်နိုင်သောအကောင်းဆုံးသော LED သည် Samsang 301B သို့မဟုတ် 301H နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး LEDs များနှင့် Osram 660nm အနီရောင် diodes များဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ samsung နှင့် orsam LED တို့ဖြင့် Hydroponic led ကြီးထွားလာသောအလင်းသည်ဒေါင်လိုက်လယ်ယာနှင့်ဖန်လုံအိမ်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုထားသော modular မြင့်မားသော LED ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Light On Technology သည်မိုးလုံလေလုံတစ်နေကုန်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အပြင်၌ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်းမှလူနေအိမ်တဲများမှအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်သင်နှင့်အတူပိုပြီးမျှဝေချင်ပါတယ်။
၁။ ထုတ်ကုန်နိဒါန်း Hydroponic မှ samsung နှင့် Orsam LED တို့မှအလင်းထွက်လာသည်
Product name: Hydroponic led သည် samsung နှင့် Orsam LED တို့ဖြင့်အလင်းရောင်တိုးပွားစေသည် Light distribution: 120 °
မော်ဒယ်နံပါတ်။: LION-GL600WHF3-08YD-0304 Thermal management: Passive
Lamp size: 1184 * 1143 * 29mm Max. ambient temp.: ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
LED quantity: (340W + 8R) * 8 Mounting အမြင့်: >15cm above canopy
LED အမှတ်တံဆိပ်: Epistar Housing color: ငွေရောင် + အနက်ရောင်
AC input power: 277V @ 600W အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - Wet location
Amperage: 277V @ 2.17A Life time: > နာရီ 50000
LED driver brand: 1*600W Inventronics N. W.: 10,15 ကီလိုဂရမ်
Power factor: > 0.9 Certification: ETL, cETL, အီး, RoHS
PPF ထိရောက်မှု 3.0 μmol / J ကို Warranty:5years
လွှမ်းခြုံမှု - 5ft * 5ft at flowering Application: ဖန်လုံအိမ်, မိုးလုံလေလုံ, ဒေါင်လိုက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး
Thehydroponic LED grow light with Samsung and Orsam LED ၁၈၀ ဒီဂရီအထိခေါက်နိုင်သောပါးလွှာသောဒီဇိုင်းရှိပြီးအလင်းအားသေးငယ်။ ကျစ်လျစ်ပြီးတပ်ဆင်ရလွယ်ကူစေသည်။ ဒီဇိုင်းကသင့်အားအလင်းအားအခန်းများ၊ ဒေါင်လိုက်ထိန်သိမ်းသည့်နေရာများစသည်တို့တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ LED ကြီးထွားလာသောမီးအိမ်များ၏အရည်အသွေးကိုအတောမသတ်အာရုံစိုက်ပါသည်။ ၀ င်လာသောကုန်ကြမ်းများအားလုံးကိုထုတ်လုပ်မှုမပြုမီ ၁၀၀% စစ်ဆေးရမည်။ ပထမနမူနာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီနှင့်အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးရမည်။ ၁၀၀% စစ်ဆေးမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Hydroponic led အလင်းသည် samsung နှင့် Orsam LED တို့ဖြင့်အလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်ချိန်သည်အနည်းဆုံး ၈ နာရီအိုမင်းခြင်းနှင့်အကြိမ်ပေါင်း ၅၀၀ ကြိမ်စမ်းသပ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်အမှားမဆိုသေချာစေရန်အထုပ်နှင့်တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ ၁၀၀% နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Hydroponic မှအာမခံသက်တမ်းသည် samsung နှင့် Orsam LED တို့ဖြင့်အလင်းထွန်း။ ၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းချွတ်ယွင်းသောနမူနာအမှာစာ (၂ ပီစီအောက်) မွာကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ASAP အစားထိုးခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချွတ်ယွင်းမှုများအတွက်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ အစားထိုးထုတ်ကုန်များကိုသင်နောက်တစ်သုတ်တွင်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းပို့မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Hydroponic led သည် samsung ဖြင့်အလင်းကြီးထွားလာသည်။ Orsam LED သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ၀ တ်ဆင်ရန်ပျက်ပြားခြင်းမရှိစေရန်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောပစ္စည်းများနှင့်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားသည်။ အသေးစားသို့မဟုတ်နမူနာအမှာစာများကိုအမြန်ဆုံး UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် DHL မှဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ အလွန်ကြီးမားသောအမှာစာများအတွက်ပင်လယ်ကုန်တင်ပိုပိုသည်။
၆။ Hydroponic ၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများသည် samsung နှင့် Orsam LED တို့ဖြင့်အလင်းထွန်းလင်းသည်
hot Tags:: Hydroponic Led Grow Light With Samsung And Orsam LED, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Buy, Factory, Customized, Made in China, Free Sample, Price List, Advanced, Fashion, Quality
ခေါက်သိမ်းနိုင်သောအကောင်းဆုံး LED သည်ဆေးခြောက်နှင့် Hemp အတွက်အလင်းကြီးထွားစေသည်